Puntland oo ka jawaabtay hadalkii Somaliland "Abaanduulaha hajnabay waa dulmane lagu haysto Hargaysa". - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandPuntland oo ka jawaabtay hadalkii Somaliland “Abaanduulaha hajnabay waa dulmane lagu haysto Hargaysa”.
September 9, 2019 marqaan Puntland, Somaliland 4
Taliyaha qeybta 9-aad ee ciidanka Daraawiishta Puntland Sarreeye Guuto Cabdullaahi Cumar Canshuur oo warbaahinta kula hadlay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Abbaan-duulaha ciidamada Somaliland kaasi oo ku hanjabay in Somaliland ay dib u qabsan doonto magaalada Badhan iyo degaannada kale ee gacanta u galay Puntland.
Taliye Canshuur ayaa Abbaan-duulaha ciidamada Somaliland ku tilmaamay mid dulmane u ah saraakiil ka soo jeedda magaalada Hargeysa oo sida uu xusay cabsi-gelin iyo xoog wax ugu yeeriya maadaama isagu uu yahay nin reer Awdal ah balse aysan niyad ka ahayn hanjabaaddiisa ku aaddan Badhan.
Gen Canshuur ayaa sidoo kale sheegay in degmada Badhan dadkii lahaa ay Somaliland ka eryeen islamarkaana aysan dib dambe u soo hawaysan karin maadaama raggii u dhashay ay heegan u yihiin in ay difaacan.
Edeb darana langaabka samaroon oo iidoor xooga ku haystan. Waa runtiis Taliye Cansuur ninkaas niyad kama ahan hanjanaadiisa… waa cabsi iidoor. 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Waxanu islahan somaliland & puntland ha midoban oo 1 mamul hadhistan,maxay tahay colada cusub oo lodurban tumayo? wa dad daris ah oo wax yalo badan ka dhexan karan,maxa udiday in aay Qoriga iska dhigan oo heshiyan oo kanastan dagalka micno darada ah.
Waagii uu Cabdullaahi Yuusuf joogay puntlaan.soomaalilaana uu ka talin jirey M.I.Cigaal baa Cabdullaahi la xiriiray Ina Cigaal oo uu ku yiri baa la yiri nin yahoow ka waran haddii aynuu labadaan qeybood isku daro oo ad adigu madaxweyne ka noqotid?Sida la sheegay Ina Cigaal waxuu yiri baa la yiri war waa arin macquula,laakiin kuwaan baanan ammaan ka helay oo aqalkay iigu soo dhacayaan.Saas baa la sheegaa.Laakiin reer soomaalilaan hadda way ka rayi duwan yahiin waagaas.
Waayo wakhtigaas waxay isla haayeen waxaad noqon doontaan dawlad gaara oo la siman soomaaliya inteeda kale.Laakiin taasi waxay noqotay Laydhooni been oo waxba ka socon waaye.Shakina kuma jiro shacabka reer soomaalilaan qaar badan oo ka mida in ay maanta raali ka yahiin la isu furo soomaaliya oo dhan.Sababtoo ah ayagay dani ugu jirtaa in ay ka soo danaystaan soomaaliweeyn oo ay u shaqo tagaan soomaaliya.One Somali One Nation.
Atoore,hadalkas sidas si ka duwan ayan umaqlay,2 marcun ilahay ha’unaxaristo,Cigaal aya so jedshey ayey leyihin dadku,waxay kale oo shegen,Abdulahi aya yiri anigu waxan donaya in aan somaliwen madax unoqdo.